Reysalwasare Khayre iyo sida loogu soo dhaweeyay Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO) | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Reysalwasare Khayre iyo sida loogu soo dhaweeyay Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)
Reysalwasare Khayre iyo sida loogu soo dhaweeyay Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)
Xasan Cali Khayre, Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay Garoonka Ugaas Nuur ee Magaalada Dhuusamareeb.
Wafdiga Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ayaa waxaa Garoonka Ugaas Nuur ku soo dhaweeyay Madaxweyne-yaasha Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug. Wasiiro, Xildhibaano, Siyaasiyiin, Odayaasha Dhaqanka iyo qaybaha kale ee bulshada.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa waxaa Magaalada Dhuusamareeb uga sii horeeyay xubno ka tirsan Shaqaalaha Xafiiskiisa iyo ilaaladiisa gaarka ah, kuwaa oo barqanimadii maanta ka amba-baxay Magaalada Muqdisho.
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa loo galbiyay Aqalka Madaxtooyada ee Magaalada Dhuusamareeb, halkaasoo uu caawa ku hooyanayo.
Khayre ayaa ka jawaabaya warmurtiyeedkii habeen hore laga soo saaray shirka Dhuusamareeb, kuna aadanaa in Madaxda Dowladda Federaalka ka soo qaybgalaan wejiga 2aad ee shirka Dhuusamareeb.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna maalmaha ina soo aadan lagu wadaa inuu gaaro Magaalada Dhuusamareeb.
Wejiga 2aad ee shirka Dhuusamareeb ayaa waxaa la fillaya in maalmaha soo socdo uu ka furmo Xarunta Madaxtooyada Galmudug ee Magaalada Dhuusamareeb, halkaasoo lagu qabtay, laguna soo geba-gabeeyay wejigii hore ee shirka.
Madaxda Qaranka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada oo muddo sanad ka badan aan is hor fariisan ayaa markaan si fool ka fool lihi isugu arki doona Magaalada Dhuusamareeb.
Muddo toddobaad ah waxaa aad loo adkeeyay ammaanka Magaalada Dhuusamareeb, waxaana maanta aad loo xadiday dhaqdhaqaaqii dadka ee magaalada, xilli horey loo xadiday dhaqdhaqaaqii gawaarida dadweynaha iyo kuwa kale ee gaarka loo leeyahay.
Bulshada ku dhaqan Magaalada Dhuusamareeb ayaad mooddaa inay la dhacsan yihiin in magaaladooda ay marti-geliso shir ceynkani oo kala ah, iyadoo aysan wax cabasho ahi ka muujin kala xir xirnaanta magaalada.